TAARIIKHDA SHIINAHA - BEERASHADA, DARYEELKA, GURYAHA WAXTAR LEH, CUNTADA SIDA CAADIGA AH - BEERTA
Yuyuba - midhaha ugu caafimaad badan
Zizyphus waa geedka qoyska Krushin, oo loo yaqaan 'unabi, jujube ama jujube.
Zizyphus waa goobta dhalashada ee Shiinaha, halkaas oo hadiyado aan cibaado lahayn ay bilaabeen in ay ku cunaan 4000 sano ka hor.
By jidka, Zizafun, oo ka soo jeeda magaca Zizifus, waa magaca Faarax ee midho kasta oo la cuni karo.
Hadda warshadda waa caadi, waxaa laga helaa Australia, Brazil, Japan, Malaysia, Caucasus, Ukraine.
Jujube waa geed yar (5-7m) geed dheer oo leh caleemo cagaar ah oo cagaar ah iyo ubax yar oo cagaaran.
Laamaha dhirta off-fasalka waxaa inta badan lagu qurxiyo leh huruud ah fiiqan. Bishii Oktoobar, on site of ubax u muuqdaan miraha ka yar yar oo huruud ah ilaa midab guduudan-brown.
Berry Jujube waa macaan-macaan ama macaan, waxay la wadaagaan oo cusub oo la qalajiyey. Laga soo bilaabo miraha jujube ee macaanka, compote, macaanka, samayn marmalade, miraha candied, miro qalalan, macmacaanka. Jam waxay u egtahay pear, laakiin waxay leedahay hoos hoos ah oo casaan.
Midhaha Zizyphus waxaa ku jira waxyaalahan soo socda:
fitamiinada kooxda A, B, C;
dabiici ah iyo asidsorbit ascorbic;
nitrogen-ku jira xeryahooda dabiiciga ah.
Noocyada cayayaanka waraabinta waraabka.
Halkan ka akhri noocyada nidaamka waraabka ee dalka.
Baro sida loo daryeelo beerta beerta: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/uhod-za-gardeniei.html
Ziziphus waxay leedahay saameyn ku leh jirka:
cadaadiska hoos u dhigaya;
waxay yareyneysaa walaaca;
hagaajinaysaa habka dheef-shiidka - shaqeyn;
daaweynaya cudurrada maqaarka;
wuxuu yareynayaa sameysyada dabaqyada khafiifka ah ee atherosclerosis;
Si guul leh ula dhaqmo qufaca, waxay ka tirtirtaa dareemayaasha aan fiicnayn ee gudaha afka;
waxay hagaajinaysaa saameynta nadaamka kaadida;
Caleemaha waxay leeyihiin saameyn suuxin ah.
Sidaad u kobcin lahayd boggaaga
Thermophilic Jujube. Caadi ahaan waxay ku koreysaa jawi diiran, sidaas darteed waa la kori karaa, tusaale ahaan, Udmurtiya, laakiin uma badna inay ku raaxaystaan ​​miraha.
In qaboobaha qabow, dhirta unabi barafoobaya ku dhowaad si xididdada.
Waxaa jira natiijada jujube koraya ee lagu koriyo oo ku yaal gobollada waqooyi, laakiin zizyfusa da 'yar ma siin midho, soo buurnaan jirey, oo jirey koritaanka.
"Miro naaso" ayaa lagu beeray guga hore ama dhexda. Xilliga dayrta - tobanka sano ee la soo dhaafay, laakiin sapling aan la jaqin ayaa jabin kara.
Bacriminta iyo humus waa in lagu daboolaa ceelka loogu talagalay zizifus.
Dhigista warshadda xarunta dhexe ee ceelka, si taxadar leh u daadi. Markaas, riixaya seedling si adag u si hoose ee godka, kula saydhaa geedaha nidaamka xidid.
Mar kale iska daa, ku dar dhulka wax yar ka yar, adigoo si khafiif ah u nuugaya. Adigoo codsanaya farsamooyinka soo degaya, waxaa suurtagal ah in lagu gaaro aasaas la'aan xanuun la'aan.
Unabi wuxuu jecel yahay iftiin badan. Hooska jujuba wuxuu ku koraa si liidata iyo ubaxyada, ubaxyada mar walba waxay u soo baxaan ubaxyo madhan, sidaas darteed beeritaanka waxay u qalantaa in la qaado meel ka qarsoon dabaysha qabow, laakiin waa la helaa qorraxda qoraxda.
Ka hor intaan la saarin, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo: sida taajku korayo, unabi wuxuu noqonayaa mid aad u kobcaya, sidaa daraadeed waxa fiican in la raaco nidaamka degitaanka 3 ilaa 4 mitir.
Jujube waa mid aan qabin dhulka, laakiin waxay ka jawaabeysaa daryeelka.
Wixii ugu wanaagsan ee noolaanshaha sirdoonka, dhulka ka yar dhirta dhalinyarada waa in aan la qodin, laakiin halkii mulched, si joogto ah ku daraya arrinta organic.
Uma baahnid inaan u oggolaano haramaha si aad uga sarreeysid meesha ay tahay mid aan la beerin: Ma jecla xaafaddan.
Jujube, sababtoo ah qaabdhismeedka xididdadiisa, si fudud u adkaata qalalan. Laakiin ma aqbalo qoyaanka ciidda xad dhaafka ah.
Juzuba waa warshad iskutallaabin ah, sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay in lagu rido naas-nuujinta ugu wanaagsan ee ku xigta, xitaa xitaa seedling oo si madax banaan kor ugu kacay dhagax.
The blooms iyo blossoms dhirta goor dambe, kaas oo u ogolaanaya si looga fogaado dhaxan.
Waa wax badan oo ubax ah, waxay u bixiyaan carafka macaan ee macaan, ka badan soo jiidata tiro badan oo cayayaanka. Muddada ubaxa - qiyaastii 60 maalmood.
Inkasta oo qaar ka mid ah ubaxyada aan weli la awoodin, juzuba, marka fruiting, waxay soo saari karaan illaa lixdan kg oo miro ah oo ka samaysan tijaabada dadka waaweyn.
Sababtoo ah aan isku mid ahayn ee ubax, Bisaylkiisa ee berry waa mid aan siman lahayn. Marka a ganaax, dayrta diirran, midhaha ayaa la soo ururin karaa ilaa October. Miro miisaanka 3-20 garaam.
Si taxadar leh, xataa xitaa naas-nuujinta "abuur" laga bilaabo lafaha wuxuu bilaabaa inuu abuuro ugxan siduu hore u ahaan jiray 2-3 sano, iyo geedo kala-duwan, oo ku salaysan fiicnaan wanaagsan, waxay awoodaan inay keenaan berry horeba sannadkii ugu horreeyay.
Waxaa fiican in la sameeyo taajka ah unabi 1-2 sano ka dib markii rooting, si aanay u dhaawaceen. Taajka waxaa sida caadiga ah la siiyaa muuqaal koob oo qaab ah iyadoo la adeegsanayo 4-5 laamood oo waaweyn oo agagaarkiisa ku yaal.
Jirrada ugu weyn waa la jaraa ilaa 15-20 cm, laamoodyo kale ayaa la gooyaa heer isku mid ah.
Inta lagu jiro koritaanka taariikhda Shiinaha, manjooyin nadaafadeed ayaa la sameeyaa, jarida laanta koraya.
Fritillary qalafsan ayaa qurxin doona beerta oo dhan iyo ku farxi doonaan ubax muddo dheer.
Waxaan ku karsannay beerta beerta gacmaheena, wax badan ka akhriso bogga: //rusfermer.net/sad/plodoviy/uxod/sadovyj-var.html
Cudurada iyo cayayaanka ee ziziphus
Zizifus ku dhowaadu ma xanuunsan, cayayaanyada cayayaanka ah ma taabtaan. Shimbiraha ayaa xiiseynaya miraha bisil, sidaas darteed berry waa in laga saaraa sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bislaadaan.
Zizyphus waxaa lagu faafiyaa caleemaha xididka, gooynta, xoqada ama miraha.
Lafaha loogu talagalay beeritaanka qaabdhismeedka 60 maalmood. Ka hor inta aan la xirin, waxaa lagu talinayaa in si tartiib ah loo leexo lafta lakabka si uu u sameeyo qashin yar: sidan ayaa u fududaan doonta jeermisku inuu soo jeesto.
Xidhaa lafaha 3-4 cm qoto dheer oo dhulka ku duuban biyo diirran. Filimada daboolka ah si aad uga fogaato biyaha uumiga dusha.
20 maalmood ka dib, dhalidda sprouts waa in loo wareejiyaa suxuunta shakhsi ahaaneed.
Dhallaanka zizifusa waxaa lagu beddelaa goob joogta ah oo joogto ah hal sano ka dib.
Laga soo bilaabo dhirta abuurka ma laha sifooyinka astaamaha ah. Miraha wax badan maaha sida "waalidiinta", oo ay bilaabaan inay boodboodaan waqti dambe, sidaas darteed dhirta waa in la beeray.
Noocyada taariikhda Shiinaha
Shiine 2A. Kala duwan oo kala duwan, miro miisaanka laga bilaabo 11 ilaa 20 garaam. Miraha waa cufan, ku haboon yahay macaanka, miro la jaray, samaynta miro digaag.
Candy Bislaado hore, aad u miro badan. Miraha - 4-8 garaam. Berry miro leh casiir leh, macaan. Caleenta nooca "Candy" oo ku haboon labada banaan iyo cunto.
Koktebel. Kala duwan oo kala duwan oo kala duwan-fruited. Miraha ayaa gaaraya 52 garaam.
Shiinada 93. Kala duwan dhexdhexaad ah. Berry waxa uu miisaankiisu yahay 5 ilaa 10 garaam. Qaabka qaabka berriga waa mid yar, wax yar oo aan caadi ahayn, curiye. Ujeeddo - universal
Syrup: 500 ml oo biyo ah, 1 kg oo sonkor ah, 10 garaam oo liin ah.
La soo qaado caleemaha cadayga ku shub sharoobada karkaraya, ka tag 7-8 saacadood, kadibna isku kari ilaa 25 daqiiqo. Ku shub maqlaha oo la nadiifiyey, isku duub.
Isku darka cuntada
Ku duub qalabka nadiifka ah, nadiifka ah ee la geliyay dhalooyinka 3-litir ah. Buuxi biyo 90 °.
Karkari biyo leh sonkorta iyo liinta (qiyaasta 3-litir - 200-250 garaam oo sonkor ah iyo 0.25 qaado shaah).
Biyaha ka daadi khaanadaha, ku shub sharoobada, ku shub.
Syrup: 1 litir oo biyo ah, 700 garaam oo sonkor ah (baahi aad u badan 1 kg ee berry). Ku rid moobaha la nadiifiyey ee digsiga, ku shub sharoobada, isku kari 2 daqiiqo. Isku day inaad soo dhoofiso 7 saacadood.
Ka saar lafaha ka soo berry ah, kuus ku dheji leh blender ah. Karkari ballaaran oo soo dhalaalaya 5 daqiiqo, ku faafi bangiyada, isku duub.
Barashada canab qalalan adoo isticmaalaya koronto.
Sida loo ilaaliyo nalalka gladiolus at home, halkan ka akhriso: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/kogda-vikapivat-lukoveci-gladiolusa.html
Guryaha dawooyinka ee ziziphus
Shaah mug leh. 10-15 berry ku shub 250ml oo biyo ah 90 °, ku adkee 15 daqiiqo. Cab hal saac ka hor wakhtiga jiifka.
Maraq si aad u yareyso cadaadiska. 5-10 berry ku shub biyo 500ml karkaraya. Ku shaqeyso 30 daqiiqo. Cool, strain, ku dar biyo karkaraya ilaa 500ml. Cab 2 jeer maalintii saddexdii biloodba.
Saliid ee caleemaha cagaarka ah. 100 garaam oo caleemo biyood ah ayaa kululeynaya 90 ° iyada oo 500ml oo saliid saynis ah oo aan saliid lahayn, ku adkaysanaya 10 maalmood. Saliidayn boogaha saliidda illaa uu ka yareeyo.
Faleebo leh qufac. 2 garaam oo caleemo ah warshad si ay u dhigaan 300 ml oo biyo ah 90 °, ku adkeyso 1 saac. Cab 50 ml 3-4 jeer.
Markaad abuurto qadar jilicsan ee deyrta, waxaad heli doontaa macmacaanka fiitamiinada hodanka ku ah, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa caafimaadkaaga.